DongGuan bùxíngzhě Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Boorsooyinkan wanaagsan ee aan labadaba u adeegsan karin, ma difaaci karo oo keliya awoodaha kor uqaadi kara sida ugu fudud ee aan u fududeeyo, laakiin sidoo kale qalabkaaga / alaabadaada. Tani waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay koronto yaqaannada u baahan inaan u adeegsado aaladaha qalajinta, xer......
Boorsada dhexda, oo sidoo kale loo yaqaan kiishka dhexda ama kiishka dhexda, ayaa laga soo gudbinayaa xariga kicinta safarka waqti hore. Hadda waxay noqotay xulasho wax ku ool ah, sida caadiga ah sida boorsooyinka dhabarka ama boorsooyinka loo yaqaan 'status tote bag'. Waxaa jira sabab wanaagsan oo ......
Dharka kore ee ardaaga taraleyda ardaaga waxaa laga sameeyaa dharka nylon-cufan oo cufan leh. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara kara roobka qoyan bacda. Gudaha gudihiisa, isku-d......